China Disposable rectangle grill mesh fekitari uye vagadziri | Jinqu Simbi
Iyo yakavharidzirwa pamucheto wegrill mesh inogona kudzivirira kuitika kwekukwaya kwemaoko. Disposable Grill pajira riya hapana chikonzero kugeza. Inochengetedza mutengo wevashandi. Isarudzo yezvehupfumi. Kune matatu marudzi: Flat mhando, convex mhando uye Arc mhando.
Suit yekubika nyama yekubikira, hove, shrimp, prawns, muriwo, matomatisi, pizzas uye zvimwe chikafu.
Inochengeta chikafu chako pane iyo grill iyo ndeyayo uye kwete kudonha pasi pakati pemagate uye inobvumidza zvakaenzana zvakagochwa chikafu nguva dzese!
Gadzira kudya kwemanheru kwakaomarara kunozokanganisa vavakidzani vako nechikafu chakakangwa chine hutano chakazara kuutsi pamwe nekupisa kubva pane yako grill.
Saizi 220 * 220mm, 225 * 225mm, 240 * 240mm, 250 * 250mm, 270 * 270mm, 280 * 280mm, 300 * 300mm
Saizi 155 * 215mm, 167 * 216mm, 170 * 305mm, 170 * 330mm, 170 * 392mm, 180 * 280mm, 198 * 337mm, 200 * 300mm200 * 330mm, 210 * 270mm,
Kutsvaga kwedu kwekusingaperi ndiwo mafungiro e "tarisa musika, tarisa tsika, tarisa sainzi" pamwe nedzidziso ye "mhando yezvakakosha, tenda mune yekutanga uye manejimendi epamberi" yeFekitori Inotengesa China Barbecue Stainless Simbi Crimped Waya Mesh yeJapan / Korea, Kana zvichidikanwa, gamuchira kuti utaure nesu newebhu peji redu kana kubvunza foni, isu tichafara kukushandira.
Fekitori Zvakananga kupa China BBQ, Grid Turu BBQ Mesh, Basa redu nderekununura zvinogara zvichikosha kukosha kune vatengi vedu nevatengi vavo. Kuzvipira uku kunopinda zvese zvatinoita, kuchititungamira kuti tirambe tichivandudza nekuvandudza mhinduro dzedu nemaitiro ekuzadzisa zvaunoda.
Pashure: Yakatenderera grill waya pajira riya
Zvadaro: Yakachipa grill mesh